I-Intel isenkingeni futhi, thola ukuvuza kwedatha | Kusuka kuLinux
I-Intel isenkingeni futhi, bathola ukuvuza kwedatha
Iqembu Abaphenyi base-University of Illinois bakhishwe zisanda kuthuthukiswa inqubo entsha yokuhlasela isiteshi eseceleni evumela ukuphatha ukuvuza kolwazi ngokuxhuma kwendandatho wamaprosesa we-Intel.
Mayelana nalolu hlobo olusha lokuhlaselwa kuhlongozwa kathathu evumela wena ukuthi wenze okulandelayo:
Buyisa izingcezwana ngazinye okhiye bokubethela lapho usebenzisa ukuqaliswa kwe-RSA ne-EdDSA okusengozini yokuhlaselwa kwesiteshi eseceleni (uma ukubambezeleka kwekhompyutha kuncike kudatha esetshenziswayo). Isibonelo, ukuvuza okuncane komuntu ngamunye ngolwazi olumayelana ne-EdDSA yokuqalisa i-vector (nonce) kwanele ukusebenzisa ukuhlasela ukuthola ngokulandelana ukhiye wonke oyimfihlo. Lokhu kuhlasela kunzima ukukusebenzisa ngokoqobo futhi kungenziwa ngenani elikhulu lezinqolobane. Isibonelo, ukusebenza ngempumelelo kukhonjiswa ngokukhubaza i-SMT (HyperThreading) nokuhlukanisa i-LLC cache phakathi kwama-CPU cores.
Chaza imingcele mayelana nokulibaziseka phakathi kokuchofoza izinkinobho. Ukubambezeleka kuncike esimweni sokhiye futhi kuvumela, ngokusebenzisa ukuhlaziywa kwezibalo, ukwenza kabusha idatha efakwe kusuka kukhibhodi ngamathuba athile (isibonelo, abantu abaningi bathambekele ekubhaleni u- "s" ngemuva kokuthi "a" ngokushesha okukhulu kune- "g" bese "s").
Hlela isiteshi sokuxhumana ngasese ukuze uthumele idatha phakathi kwezinqubo ngejubane cishe lama-megabits ama-4 ngomzuzwana, okungasebenzisi imemori eyabiwe, i-cache processor, noma izakhiwo zeprosesa nezinsizakusebenza ezithile ze-CPU. Kuyabonakala ukuthi indlela ehlongozwayo yokwakha ishaneli ecashile kunzima kakhulu ukuyivimba ngezindlela ezikhona zokuzivikela ekuhlaselweni ngeziteshi eziseceleni.
Abaphenyi babika nokuthi ukuxhashazwa akudingi amalungelo aphakanyisiwe futhi kungasetshenziswa abasebenzisi abajwayelekile ngaphandle kwamalungelo, babuye bakusho lokho kuhlaselwa ingahle yenzelwe ukuhlela ukuvuza kwedatha phakathi kwemishini ebonakalayo, kepha le nkinga yayingaphezu kophenyo futhi amasistimu we-virtualization awahloliswanga.
Ikhodi ehlongozwayo ihlolwe ku-Intel i7-9700 CPU endaweni ye-Ubuntu 16.04. Ngokuvamile, indlela yokuhlasela ihlolwe kuma-processor we-Intel Coffee Lake naseSkylake desktop, futhi kungenzeka isebenze kuma-processor we-Broadwell Xeon.
Ubuchwepheshe beRing Interconnect buvele kuma-processor asuselwa ekwakhiweni kwezakhiwo kweSandy Bridge futhi inamabhasi amaningi we-loopback asetshenziselwa ukuxhuma ama-computational kanye ne-graph cores, Northbridge kanye ne-cache. Ingqikithi yendlela yokuhlasela ukuthi ngenxa yomkhawulo we-bandwidth band webhasi, ukusebenza kwememori kunqubo eyodwa kubambezela ukufinyelela kwimemori yenye inqubo. Lapho imininingwane yokuqalisa isakhiwe kabusha, umhlaseli angenza ukulayishwa okuholela ekubambezelekeni kokufinyelela kwememori kwenye inqubo futhi asebenzise idatha yokulibaziseka njengesiteshi eseceleni ukuthola imininingwane.
Ukuhlaselwa kwamabhasi we-CPU angaphakathi kuphazanyiswa wukungabi nalwazi mayelana nokwakhiwa nezindlela zokusebenza kwebhasi, kanye nomsindo osezingeni eliphakeme okwenza kube nzima ukukhipha idatha ewusizo. Kwakungenzeka ukuthi kuqondwe imigomo yebhasi ngokusebenzisa ubunjiniyela obubuyela emuva bama-protocols asetshenziswa lapho kudluliswa idatha ngaphezulu kwebhasi. Ukuhlukanisa imininingwane ewusizo emsindweni, kwasetshenziswa imodeli yokuhlukaniswa kwedatha ngokususelwa ezindleleni zokufunda komshini.
Imodeli ehlongozwayo yenze ukuthi kube nokwenzeka ukuhlela ukubhekwa kokubambezeleka kwamakhompiyutha kunqubo ethile, ezimweni lapho izinqubo eziningana zifinyelela ngasikhathi sinye inkumbulo nengxenye yedatha ibuyiselwa kusuka kunqolobane ye-processor.
Ekugcineni, uma ufuna ukwazi kabanzi ngayo, ungaxhumana ne- idokhumenti elandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-Intel isenkingeni futhi, bathola ukuvuza kwedatha
I-Dolt uhlelo lwe-Git-style database management